Chisikiti cheMwana neChidiki | Health & Prevention | Mapeji evaravara ehurukuro
Chisikiti cheMwana neChidiki | Health & Prevention
Zvishongedzo zvezuva zvakakodzera zvecheche nechecheche
Kuti vana nevana vanyatsonakidzwa nezuva, zvakakosha kutora matanho. Izvi zvinonyanya kuitika, sezvo zuva rakananga rinofanira kuva ravana kusvikira makore 2.
Chisikopo chezuva chinokosha paganda recheche nevana vaduku
Izvi zvinokosha nekuti ganda revana nevana vaduku rakanyanya kunyatsonaka. Kunyanya kana ine chokuita nehutachiona hweUV.
Kuchengetedzwa kwezuva kumucheche nechecheche - pasinei nokushorwa panguva yekugadzira
Ganda racho richiri rakapfava mumakore ekutanga ehupenyu uye zvakare UV-kudzivirira, iyo inopoteredza ganda, inofanira kutanga kukura izvo zvinoitika mumakore ekutanga ehupenyu. Ichokwadi kuti vana vanofanira kugara vachipiwa mukana wekutamba, kutamba uye kuenda kunze. Zvechokwadi, sezvo vana vachimanikidzirwa kuti vaonekwe nemirairo yeVV, dzimwe nzira dzinodzivirira dzinofanira kutorwa.
Zvakakosha kuti vana vanopedza zvizhinji zvemakore maviri ekutanga ehupenyu mumumvuri. Kunyanya panguva ino, vana vanofanira kuzarurirwa zvishoma kana zvichibvira kana zvishoma sezvinobvira zuva rakananga. Shady nzvimbo dzakanaka pano.
Zuva rakananga rinofanira kuvharwa kunyange nechikanda chezuva chakafanana nehood kana girasi, sezvo zvingaita kuti vana vawedzere kupisa. Mugore rokutanga rehupenyu iwe unofanirwa kuita kunze kwezuva. Izvi zvingave zvisina kukodzera kutakura ganda rakaoma kwazvo revana.
Zvakakoshawo kuti mafuta evana haisi yezuva. Kuburikidza nemafuta, iyo photosensitivity yechecheche inenge ichiri kukurudzirwa. Asi kwete chete nechecheche, kunyange nevana kusvikira kuchikoro chemakore, zvinokosha kuti vadzivise zuva rinopisa. Kwemaawa imwe pazuva, vana vanofanira kutamba, kupopota, uye kufamba mumhepo itsva. Izvi zvinotsigira kukura kwevana. Saizvozvowo kuzviita kwemavhitamini anokosha D.
Asi zuva rakananga rinofanira kudzivirirwa kunyange pashure pemakore maviri ekutanga ehupenyu. Izvi zvinonyanya kubhadharwa nechekuti ganda revana harigone kubudisa mavara, ayo ari chikamu chekudzivirirwa kwechisikigo, zvakaringana uye nekukurumidza zvakakwana. Zvose zvinopisa zuva uye kubwinya zvinofanira kudzivirirwa pamatambudziko ose. Chisikiti chezuva chinobudirira chinoramba chakafukidzwa munzvimbo dzine shady uye kune dzimwe mbatya dzinobatsira zuva.
Mukuwedzera kune nzvimbo dzine shady, yakanakisisa yezuva ndiyo micheka yakakodzera. Kunyanya iyo musoro, kunyanya mutsi, nzeve uye chiso zvakanyatsonzwa. Nokudaro, mwana anofanira kugara achifuka kapu, hove, kana zvimwe zvakaita zuva. Zvimwe zvehupfeko zvinofanira kunge zvakasvibira uye zvichiri kuvhara muviri wakawanda sezvinobvira.
Kudzivirirwa kunopisa zuva
Inofanirawo kuonekwa kuti havasi zvinhu zvose zvakasviba zuva. Zvisinei, kune zvipfeko zvakasvibirira zvezuva, izvo zvinopa kudzivirirwa zviri nani kuburikidza nemicheka yakakosha.
Muchikamu chakanaka izvi izvi zvinowirirana nehuwandu hweVV 801 uye vane UV kuchengetedza chinokonzerwa ne30. Uyewo kune shangu, idzi dzinofanira kuvhara rutsoka rwese sezvinogona.
Sunscreens sechimwe chiyero
Mukuwedzera kune zvipfeko zvakakodzera, zvikamu zvose zvomuviri zvisina kufuka zvinofanira kuchengetedzwa nekodzero yezuva yakakodzera. Izvo zvinofanira kuonekwa kuti kugara uchikandira hakufaniri kutungamirira vana vachibvumirwa kutamba muzuva rinopisa. Shandisa chechena chezuva chete chinonyanya kugadzirirwa vana.
Mukuwedzera, mumwe anofanirwa kuve nechokwadi chokuti mari inomesa ganda rakaoma revana kupfuura zvinyorwa uye zvisikwa. Zuva rakasarudzwa rinofanira kuchengetedza mavari UV-A uye UV-B uye rinofanirwawo kunge rine SPF imwe ye20. Zvose zvisina kufuka dzinofanira kunge dzakagadzirwa nemaminitsi e30 vasati vabuda. Uyewo, chitubu chezuva chinofanira kushandiswa.
Kana nguva yakareba iri kugara kunze yakarongwa, kunyorera kunofanira kudzokororwa. Kunyanya mumvura, dambudziko rekushisa kwezuva rinowedzera. Nokudaro, mvura yakachena yezuva inofanira kushandiswa.
Sezvinonzwisisa zuva sezvo ganda maziso. Kana izvi zvakanyanya kutakudzwa neV-B, zvinogona kutungamirira mukuputika kwe conjunctiva uye cornea.
Magirazi egorosi kuvana anofanirwa kuchengetedza mazai e UV kunyanya akavimbika
Ndiko kusaka kunyange magirazi emasikati ane kudzivirirwa kwezuva kwakakwana haafaniri kunge aripo.
Zvisinei, zvinokosha zvakare mukuchengetedzwa kwezuva kuti vana vane muenzaniso wakanaka, saka vabereki vose vanofanira kubhadhara zuva rakachengetedzwa rakakwana. Saka vana vanotarisa mumakore ekutanga, mufambiro wakanaka muzuva rakasimba.
Saka vabereki havafaniri kupedza nguva yakareba muzuva rinopisa uye nguva dzose vanozvidzivirira nemavatya akakodzera uye sunscreen.